Inona no hividianana cryptocurrency hanombohana ny famoronana portfolio of assets crypto | Vaovao momba ny gadget
Inona no hividianana cryptocurrency hanombohana ny famoronana portfolio of assets crypto
Vaovao momba ny gadget | | Cryptocurrencies
Na dia tsy mila miaina toy ny vitsika ohabolana foana aza ianao ao amin'ny tantara dia tsy fahendrena ny manao toy ny cicada fotsiny, ary noho izany mamorona tahiry sarobidy, na dia manetry tena aza, tsy maharary velively. Raha mahatsapa ho adventurous kely koa isika dia afaka misafidy vola ara-bola, vola crypto, fa noho ny fahatanorantsika dia tsy fantatsika ny alehany, mety hitombo toy ny sombin-javatra izy io, milentika ory na hahatratra fitoniana mitovy amin'izay ankafizin'ny vola be izao (farafaharatsiny ny vola manandanja indrindra eto an-tany).
Raha ny zava-dehibe indrindra ihany no hifantohantsika, dia vola dimy angamba izany; Bitcoin malaza, ny olona sasany mividy Ethereum, na raha tsy izany Bitcoin Cash, XRP na Tether. Ireo dimy ireo no voalohany amin'ny laharam-pahamehana, raha aleontsika mifantoka amin'ny lanja isam-bolan'ny cryptocurrency tsirairay dia hiovaova be ny laharana, eny, izay tsy miova mihitsy dia ny toerana misy ny voninahitra, izay zakan'ny Bitcoin hatrany.
1 Ny 5 manan-danja indrindra
Ny 5 manan-danja indrindra
Bitcoin (BTC) no voalohany, io no izy manana sanda ambony kokoa isaky ny farantsa, amin'ny 8.165 9 dolara isaky ny cryptocurrency tamin'ny 2019 Oktobra 147. Ho fanampin'izany, na dia very toerana aza izy rehefa miditra amin'ny lalao ny mpilalao vaovao, dia mifantoka amin'ny volan'ny vola crypto lehibe indrindra amin'ny vola crypto rehetra, manodidina ny 000 tapitrisa dolara, hahazoana ny hevitry ny preponderance ny BTC koa amin'ity singa ity. Ny manaraka amin'ny haavon'ny kapitalisma, Ethereum, dia manangona vola be eo ambanin'ny 000 miliara dolara, izay etsy ankilany, tsy maintsy lazaina fa tsy ratsy velively.
Amin'ny maha-teboka farany tsara anao, raha malala-tanana ianao, ny isa betsaka indrindra amin'ny BTC dia 21 tapitrisa, ankehitriny eo anelanelan'ny 17 sy 18 tapitrisa amin'izy ireo dia nohainaina, ary tsy hisy iray intsony, noho izany, ho afaka amin'ny loza ianao ny ny vidim-piainana ary manasongadina ny toetrany miaro ny sandany.
La faharoa amin'ny fifandirana varotra, efa hifarana ny ampahatelon'ny volana oktobra voalohany, manodidina ny 176 dolara isaky ny Ethereum (ETH), tsy izy no faharoa sarobidy indrindra (amin'ny volana oktobra 2019 dia mbola Maker izy, miaraka amin'ny 460 dolara isaky ny farantsakely), saingy ao anatin'ny sarobidy indrindra, iza no tsy te hanana ETH vitsivitsy ao amin'ny poketran'izy ireo crypto? Na dia saika ny cryptocurrency rehetra aza dia azo vidiana amin'ny fizarazaran'izy ireo, izany hoe, afaka mividy ampahany amin'izy ireo ianao, tsy ilaina ny mividy azy manontolo, mamela antsika hanana ny fananana iray manontolo ny ETH nefa tsy mila mandoa vola mihoampampana.
Miaraka amin'ny sanda izay mazàna mihetsika hatramin'ny faran'ny volana Jona tamin'ity taona ity manodidina ny telovolana, ny Ripple cryptocurrency 12 miliara dolara no kapitaliny.
La Fork BTC mitazona ny ankamaroan'ny laza amam-bolan'ny ray aman-dreniny izy io, fa tsy manao varotra amin'ny $ 231 isaky ny vola madinika, raha jerena fa nanomboka ny varotra taona lasa amin'ny $ 113 intsony.
Tether, an'iza Ny sandan'ny varotra ankehitriny dia manodidina ny $ 1, dia voafatotra sy tohanan'ny vola fiat, izay miaro azy amin'ny tsy fisiam-bolan'ny crypto hafa, na ny fianjerana na ny dombo maranitra, izay mety tsy hahatonga azy io ho lasa cryptocurrency mety indrindra raha tianao ny maminavina.
Tsy fantatsika izay hitranga amin'ny ho avy, fa ny tena azo antoka dia ny hoe miaraka amintsika ny fitrandrahana vola crypto farafaharatsiny ary manohy mampiakatra ny filan'ny nofo sy ny fankahalana. Raha tsy anisan'ny vondrona faharoa isika dia mendrika ny handray izany farafaharatsiny ho fampiasam-bola ary hanaraka ny vaovao mifandraika amin'izy ireo.
Raha nifarana ny taona 2018 mihoatra ny vidiny izay nananan'ny maro tamin'izy ireo tamin'ny fotoana nahaterahana, saingy ambany kokoa ny vidiny tonga tamin'ny faran'ny 2017Ny zava-misy fa tamin'ny faran'ny volana Jona dia efa nampitomboin'ny BTC ny lanjany nanomboka ny 6 volana lasa izay, ary tsy tokony ho tsikaritra izany, ary amin'ny ambaratonga kely dia toy izany koa no azo lazaina momba ny vola crypto lehibe rehetra.
Mazava ho azy fa tsy midika izany fa hitsangana indray izy ireo, eo amin'ny tontolon'ny famatsiam-bola dia tsy misy azo antoka, fa ny toa asehony dia hoe, mifanohitra amin'izay noheverin'ireo mpanohitra azy, mbola manana tady ny vola crypto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Inona no hividianana cryptocurrency hanombohana ny famoronana portfolio of assets crypto
Ahoana ny fomba hisorohana ny INE tsy hisoratra anarana ny toerana misy anao
Ny sarimihetsika tsara indrindra hijerena ity Halloween ity amin'ny Netflix sy HBO